ဘယ်တော့မှ လက်မြောက် အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ ဟွန်းဒါး ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:03 PM | No မှတ်ချက် | ပြောချင်လွန်းလို့
ဂျပန်နိုင်ငံက .မော်တော်ကားနဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တွေ. တကမ္ဘာလုံးကို တင်ပို့နေတဲ့. ဟွန်းဒါး(Honda) ဆိုတာ .ကြားဖူးကြမှာပါ။.
ဟွန်းဒါး ကုမ္ပဏီကို စတင် တည်ထောင်သူက. ဂျပန်လူမျိုး ဟွန်းဒါးပါ။. နာမည် အပြည့်အစုံက. Soichiro_Honda (ဆိုချီယို ဟွန်းဒါး )ဖြစ်ပါတယ်။. ဟွန်းဒါးကို. အနောက်နိုင်ငံက. သတင်းစာ .မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ .အခက်အခဲနဲ့ ဘယ်လောက်ကြုံကြုံ. ဘယ်တော့မှ အရှုံမပေးတဲ့ လူလို့ ချီးကျူးရေးသား ကြပါတယ်။ .ဘာဖြစ်လို့. ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကို. အနောက်နိုင်ငံတွေက .ချီးမွန်းနေရတာလဲ ဆိုတာ .လေ့လာကြည့်ကြ ရအောင်။
၁၉၃၈ခုနှစ်မှာ .အသက်၂၁နှစ် အရွယ် လူငယ်လေး ဟွန်းဒါးဟာ .မော်တော်ကား အင်ဂျင်မှာသုံးတဲ့. ပစ္စတင်ကွင်း (Piston_Ring )လေးတွေကို .သူ့ရဲ့ကားပြင်တဲ့
အလုပ်ရုံမှာ. စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တယ်။ .အောင်မြင်ရင်. တိုယိုတာမော်တော် ကားကုမ္ပဏီကြီးကို .သူ့ပစ္စည်းတွေ သွင်းမယ်ပေါ့။ .အလုပ်ရုံထဲမှာ .တယောက်ထဲ .နေ့ရော.ညရော. တကုပ်ကုပ်နဲ့ကြိုးစား ပမ်းစားလုပ်တယ်။. ပိုက်ဆံမလောက်လို့. သူ့မိန်းမရဲ့ လက်ဝတ် လက်စားတွေရောင်းချပြီး. ဆက်လုပ်တယ်။.နောက် ဆုံးအောင်မြင်စွာ. ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ .ပစ္စည်းနမူနာအချို့ကို ယူပြီး. တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီကို သွားပြတယ်။. သူ့ပစ္စတင်ကွင်းတွေဟာ. စမ်းသပ်ရင်း. တချို့ကျိုးကုန်လို့. Quality အရည်အသွေး မမှီဘူးဆိုပြီး. ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။.
ကိုကောင်းကောင်း မသိလို့ဖြစ်မှာပဲ ဆိုပြီး. အင်ဂျင်နီယာကျောင်း သွားတက်တယ်။ .ကျောင်းက. အင်ဂျင်နီယာတွေက .သူ့ရဲ့ ပစ္စတင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး.
ဝိုင်းဟားကြတယ်။. သူရှက်ပြီး. စိတ်ပျက်သွားပြီလား။.---နိူး---
အခု.ဟွန်ဒါးဟာ. ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖို့. စက်ရုံတခုဆောက်ဖို့ လိုလာပြီ။. ဒါပေမဲ့. အဲဒီအချိန်မှာ
.ဒုတိယက မ္ဘာစစ်ကြီးစတင်တော့မှာမို့. ဂျပန်စစ်တပ်က. ဘိလပ်မြေတွေ အကုန် သိမ်းထားတယ်။. ဟွန်းဒါးဟာ. ဘိလပ်မြေကို. ဘယ်မှာမှ .ဝယ်လို့မရတော့ဘူး။. ဟွန်းဒါး စိတ်ပျက် သွားပြီလား။---နိူးနိူး---
၁၉၄၅ခုနှစ် .ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသွားပြီ။. အဲဒီအချိန်မှာ .ဓါတ်ဆီ အရမ်းရှားသွားလို့. ဂျပန်လူမျိုတွေဟာ .ကုန်းကြောင်းလျှောက်ရင်လျှောက် .မဟုတ်ရင် .စက်ဘီးစီးပြီး သွားလာနေရတယ်။. ဟွန်းဒါးက. ဓါတ်ဆီအစား သက်သာတဲ့. အင်ဂျင်အသေးလေး တလုံးကို. ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး သူ့စက်ဘီးမှာမှာ တပ်လိုက်ပြီး. တနေရာနဲ့တနေရာကို သွားလာတယ်။.အိမ်နီးချင်းတွေက. သဘောကျပြီး .သူ့ကိုအဲဒီလို. အင်ဂျင်အသေးလေး တပ်ထားတဲ့ စက်ဘီးတွေလုပ်ပြီး .ရောင်းပေးဖို့ပြောကြတယ်။. သူလဲ .အဲဒီစက်ဘီးလေး (နောက်တော့. ဆိုက်ကယ်လို့ခေါ်တယ်)တွေ .ရောင်းပေးတယ်။. တဖြည်းဖြည်းနဲ့.လူသိများလာပြီ .အော်ဒါတွေ မှာကြတယ်။. အင်ဂျင်လုပ်ဖို့. သံထည် ရှားပါးတာရယ် .သူ့မှာငွေကြေး
မလောက်တာရယ်ကြောင့်. ဆိုင်ကယ်လေးတွေ ထပ်မထုတ်နိုင်တော့ဘူး။. ပစ္စည်းအော်ဒါမှာ သူတွေကို .ပစ္စည်း မထုတ်နိုင်တော့ကြောင်းတောင်းပန်ရတယ်။. သူစိတ်ပျက်သွားပြီလား။ ---နိူးနိူးနိူး---
ဟွန်းဒါးဟာ .စက်ဘီးဆိုင်ပေါင်း (၁၈,၀၀၀)က. ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဆီကို. စာပို့လိုက်ပါတယ်။.
စာထဲမှာ. ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ရှုံးသွားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပြန် လည်ကောင်းလာဖို့. သူကြိုးစားနေတာမို့. သူ့ကိုကူညီပြီး အစုငွေထဲ့ ဝင်ကြဖို့ရေးထားပါတယ်။ .ဆိုင်ရှင်ပေါင်း (၅,၀၀၀)ဆီက .စာပြန်လာတယ်။. သူ့ကို ကူညီမယ်ပေါ့။ .သူ့ဆီမှာ. အစုငွေထဲ့မယ်ပေါ့။ .အစုငွေတွေနဲ့. အသေးစား အင်ဂျင်တပ် ဆိုင်ကယ်လေးတွေ. ထုတ်တယ်။ .ရောင်းရလွန်းလိ့.. SuperCub စူပါကပ် ဆိုင်ကယ်ဆိုပြီးနာမည်ကျော် သွားတယ်။ .စူပါကပ်တွေကို. အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေကို .အမြောက်အများ တင်ပို့နေရတယ်။